19 Best Glossier Products Worth Your Money 2020 - Ubuhle
Imikhiqizo Engcono Kakhulu YeGlossier Ifanele Imali Yakho
Abahleli bethu bahlole konke kusuka kulo mkhiqizo ukubika kokuhle kakhulu.
Uma kukhona uhlobo olulodwa olukhombisile ukuthi lufanele i-hype, yi-Glossier. Ngokuyinhloko konke ukwethulwa okusha ngokushesha kuhlala ngaphezulu kwamashadi wemikhiqizo yeGlossier amahle kakhulu. Akunzima ukubona ukuthi kungani: IGlossier iyisigaba esiyinhloko sobunikazi bomkhiqizo (bona: ukupakisha kwayo kweminyaka eyinkulungwane, ukupakisha kwe-G, nezikhangiso eziphuphayo kodwa ezingokoqobo), kuphelelise ubuciko bokubukeka kwezimonyo ezingekho-makeup, futhi ine-fanbase uqotho kangangokuba abathengi bazolinda ngesineke (imvamisa bephuma emnyango wamagumbi ayo okubukisa) ukuze babeke noma yini evele ishaye emashalofini.
Kepha njenganoma yini ebonakala imnandi kakhulu ukuthi ingaba yiqiniso, labo abangangeni ngokuphelele esitimeleni seGlossier bavame ukuzibuza ukuthi ngabe imikhiqizo yayo ikufanele ngempela yini. Ingabe Umfana Brow empeleni uguqule amashiya akho ngokuswayipha okumbalwa okukodwa? Ingabe I-Cloud Paint ngokungathi sína njengoba ithubhu yalo ebabazekayo ibangaholela ekukholweni? Ngabe imikhiqizo yeQhawe Lomzimba izizwa ingcwele njengayo bheka izikhangiso ? Uma ukubuyekezwa kweGlossier ngaphambili kunokuthile ongakusho, impendulo inguyebo ozwakalayo.
Sibuze i- Ubuhle Ithimba lokuswayipha futhi lihlehle kuwo wonke umkhiqizo owodwa osendaweni yomkhiqizo ukuze labelane ngemikhiqizo emihle kakhulu yeGlossier esingenakuphila ngaphandle kwayo ngokuphelele. Uma ukholwa noma ungakukholwa, izinketho zeqembu eziyizintandokazi zafika kulo lonke ibhodi (kepha yebo, sithole okungenani izimpendulo ezinhlanu ezigcizelelayo ezisanda kuthi ' UMFANA Brows !!! '- wonke amakepisi, izibabazo eziningi). Skrolela kuzibuyekezo zethu ezithembekile zeGlossier ukuze ubone ukuthi yini okufanele usebenzise imali yakho kuyo.
Yonke imikhiqizo efakwe ku-Glamour ikhethwe ngokuzimela ngabahleli bethu. Kodwa-ke, uma uthenga okuthile ngezixhumanisi zethu zokuthengisa, singathola ikhomishini yokusebenzisana.
I-Glossier Boy Brow
Kunesizathu sokuthi lo mkhiqizo ungumthengisi ophezulu weGlossier (nokukhuthazwa kwamakhophi amaningi kangaka): Kuyamangalisa. Ngithanda konke ngakho — ithubhu lalo elincane, ibhulashi lalo le-teeny elihlukanayo futhi lilungiswe kahle, ifomula lalo elinamathele kakhulu, elingenalutho, nefomulaxy eligcina izinwele endaweni izinsuku. Okungcono nakakhulu, i-Glossier ekugcineni inwebise uhla lwayo lomthunzi ukuze ifake umthunzi we-auburn wamakhanda abomvu njengami. —ULindsay Schallon, umhleli wezobuhle omkhulu
$ 16 I-Glossier Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 2/19
I-Glossier Stretch Concealer
Wonke umuntu uthi into yokugcina abayifunayo ekusithekeni yi-cakey-ness. Ukuba nezimonyo ezibonakalayo kuhlale kahle emigqeni emihle sonke esinayo akukuhle futhi kwehlula injongo, kimi, yokugqoka izimonyo ekuqaleni. Engikuthandayo ngeGlossier's Stretch Concealer ukuthungwa kwayo. Kulula kakhulu futhi kunamazolo kangangokuba cishe akunakwenzeka ukuthi kuhlangane. Ngaqala ukuyisebenzisa hhayi ngaphansi kwamehlo ami ukumboza imibuthano kuphela kepha nangamajwabu amehlo ami ukunikeza ubuso bami ukubukeka okuhlangene kakhudlwana, kanye nokumboza ububomvu ngaphansi kwekhala lami nasemakhoneni omlomo wami. Kubukeka kungokwemvelo okuhle kakhulu - abanye bangathi kungokwemvelo kakhulu uma ukumbozwa okugcwele nge-ultra kuyinjongo - kepha kuyangisebenzela lapho ngingazizwa njengobuso obugcwele besisekelo futhi ngifuna ukukhanya ngenkathi ngisafihla izingqinamba zesikhumba sami. —UPerrie Samotin, umqondisi wedijithali
$ 18 I-Glossier Thenga Manje
IGlossier Balm Dotcom
Angizifaki izimonyo ngaso sonke isikhathi — kodwa ngizogcoba i-lip balm, yingakho ifomula yeBalm Dot Com ingikhanga kakhulu. Kukhanya futhi kunamafutha ngaphandle kokunamathela, kepha kufakwe umbala kule mibala emihle eyenza kubonakale sengathi ngizamile. ICherry umbala wami wokuya, kepha ngeqiniso, awukwazi ukungahambi kahle nganoma iyiphi yazo. -UShanna Shipin, umhleli wezohwebo
$ 12 I-Glossier Thenga Manje
phusha u-bra inkomishi
IGlossier Lash Slick Mascara
Ngiyayithanda indlela ifomula yeLash Slick eqhubeka ngayo ngokulinganayo nama-brush 'combs' ngakho-ke ukuqhuma ngakunye kugcizelelwa. Ngiyabonga futhi ukuthi imicu emincane ifaka i-oomph ngaphandle kokuguqula imivimbo yami ibe yimilenze yesicabucabu. Ngenkathi amanye ama-mascaras eqhubeka emanzi futhi ngokushesha ashiye amamaki amachashazi ngaphansi kwezikhangiso zami, uLash Slick ngomlingo uhlala ebekiwe — kusukela lapho ngiwabeka ngaze ngageza ngawo ebusuku. Nganginovalo, ngoba alunamanzi, alunamanzi, kodwa ngiyajabula ukubika ukuthi aluhambeki noma alunamanzi. -Kimberly Fusaro, umqondisi wokuqukethwe onomkhiqizo
IGlossier Milky Jelly Cleanser
Bengingumlandeli weGlossier kusukela ngosuku lokuqala, futhi iningi lemikhiqizo yayo ingenele indlela yami yansuku zonke (sawubona, Boy Brow!). Kodwa uthando lwami lujula kakhulu ngeMilky Jelly Conditioning Face Wash yalo. Ukuthungwa kuhlukile — ukuphela kwendlela engingayichaza ngayo ukuthi iyisidudla — futhi ayikaze ishiye isikhumba sami sizizwa siqinile noma sikhunyuliwe. Ngiyisebenzisa ekuseni esikhunjeni esomile nasebusuku ngemuva kokuhlanza uwoyela noma amanzi we-micellar ukususa izimonyo. Iphunga liyamangalisa: Kufana ne-roses kanye ne-lipstick, kodwa kuyicashile ngokwanele ukuthi kungacasuli isikhumba sami esibucayi. Ngiyohlala nginebhodlela endlini yami yokugezela ngoba liyasebenza, futhi ngokwethembeka nje liyangijabulisa uma ngilisebenzisa, okuyilokho ubuhle obumayelana nakho. —Bella Cacciatore, umsizi wobuhle
Ngokuzithoba komkhiqizo 6/19
Imvamisa ngangihambisa amehlo ami kunoma yini ebizwa ngokuthi 'ukunakekelwa kwesikhumba ngobuhle' — okusho ukuthi, umkhiqizo onikeza izinzuzo zokunakekelwa kwesikhumba kodwa futhi obukeka ungakholeki — kepha yilokho kanye lokhu okuyi-hybrid-oil serum, nokukhanya okukunikeza ubuso akunakwenzeka ukuklolodela. I-Futuredew ithola umlingo wayo okhazimula esikhunjeni kusuka kumaminerali akhombisa ukukhanya, kepha futhi inazo zonke izinto ongazifuna ku-serum enkulu ene-hydrating: ijojoba, imbewu yamagilebhisi, i-evening primrose, namafutha e-rosehip, kanye ne-squalane ukusiza ukungena ngaphakathi umswakama. Inani lezincomo engilitholile esikhunjeni sami lenyuke ngokuphindwe kayishumi selokhu ngaqala ukulisebenzisa. Akunamanga. —L.S.
$ 24 I-Glossier Thenga Manje
I-Glossier Pro Tip Liquid Eyeliner
Ngeke ngiqambe amanga: Lapho ngiqala ukukuhlola lokhu ngokudweba ama-swatch esandleni sami, angizange ngihlatshwe umxhwele yinzuzo yombala. Kepha lapho ngiyizama emehlweni ami, ngabona ukuthi kulapho imilingo ifika khona empilweni. Ifomula elenzekayo lenza ukuthi lonke ulwazi lube ngaphansi kakhulu. Uma ulayini wakho ungahambi kahle, kulungile, ngoba awumnyama kakhulu mnyama uze udwebe izingqimba ezimbalwa. Lokhu kusho ukuhlaselwa yinhliziyo okuncane kulabo abangakwazi kahle iso lekati nokuguquguquka okuningi kusuka emini kuze kube sebusuku. Ithiphu yebhulashi i-superthin futhi ishibilika kulayini wakho wokuqhuma ukuze uthole i-vibe ecashile ezwa njenge-Glossier kakhulu, futhi ukulawula kuyinto ephezulu kakhulu! Lapho ngigeza izandla zami, ama-swatches awazange anyakaze. —U-Erin Parker, umbhali wezohwebo
I-Glossier Hand Cream
Ngakho konke ukuwashwa kwezandla ebengikwenza kusukela kushaya i-COVID, lo ukhilimu wesandla ocebile-kodwa hhayi onamathelayo ubelokhu eyi-godsend. Kunuka iphunga lomkhiqizo, Wena, ohlanzekile futhi omusha ngokukhombisa okuncane kwezimbali. Ngifisa sengathi ngabe ngiya ezindaweni eziningi kulezi zinsuku, ngoba lolu uhlobo lokupakisha okuhle awusoze wagula ngokukhipha esikhwameni sakho. —L.S.
Ngokuzithoba komkhiqizo 9/19
IGlossier Generation G Lipstick
I-Generation G lipstick eyakhiwe kabusha yeGlossier iyintandokazi yami entsha. Ngiyayithanda indlela ekhululeke futhi ethambisa ngayo. Ngisebenzisa i-Zip color, ebanzi futhi eyakhayo, ngakho-ke ngiyisebenzisa ekuhambeni, kepha ngisafaka isibhakela esinjalo kangisadingi ukugqoka enye into ngaso. Yindebe ebomvu ephelele kulabo abanamahloni amancane njengami. -Khaliha Hawkins, umkhiqizi
Ngokuzithoba komkhiqizo 10/19
Iqhawe lomzimba weGlossier
Kuze kube yiQhawe Lomzimba, bengikholelwa ukuthi imethrikhi eyodwa ebaluleke kakhulu ekugcotheni ukuthi iswakama kahle kanjani. Ngangingu-noob! Awunacala futhi uyacindezela! Kepha lapho nje ngithola le nto (ekhangayo!), Ngafunda iqiniso. I-lotion enhle izokwenza ukuthi imilenze yakho ibukeke yinde, isikhumba sakho sizwe sengathi sidambile, nomzimba wakho unuke njengembali esanda kukhiwa. Sengihlele kabusha kathathu. —UMattie Kahn, umqondisi wezamasiko
$ 22 I-Glossier Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 11/19
Sengikuzo zonke izinsuku zokuqhakambisa izinsuku ezingama-365 zonyaka-kepha ikakhulukazi uma ngizizwa ngiphelelwa amandla kancane. I-combo yama-crystal extracts kanye namafutha wangempela okuthambisa eHaloscope aqinisekisa ukuthi ngibukeka ngibukeka ngisha futhi nginamazolo ngenkathi ithambisa isikhumba sami ngasikhathi sinye. Ideshi ezihlathini zami, amathambo ebunzi, kanye nebhuloho lamakhala ami, futhi ngikulungele ukuhamba. —U-Abby Gardner, umbhali wezindaba
Ngokuzithoba komkhiqizo 12/19
I-Glossier Cloud Paint
Ngangivame ukufunga I-Nars Orgasm Blush —Futhi namanje isiyi fave! —Kodwa selokhu ngazama iGlossier Cloud Paint, nginenkinga yokusebenzisa enye into. I-Cloud Paint kulula kakhulu ukuyisebenzisa (ngisebenzisa umunwe wami), futhi ihlangana kalula ezihlathini zami. Ishubhu elincane nalo liyakhohlisa; empeleni kungithatha izinyanga yize ngiyisebenzisa nsuku zonke. Ngokuqondene nombala, ngizoshintsha ngisebenzisa i-Beam ne-Puff phakathi nezinkathi. I-Beam i-orangey, ngakho-ke inika ukukhanya okuhle ehlobo, kanti iPuff iyi-pink ekhanyayo ebukeka kahle lapho ngikhanya ngokwengeziwe. —B.C.
Ngemuva kokuhlanza isikhumba sami ebusuku, ngiswayipha le toner ye-glycolic acid ebusweni bami nasentanyeni yami ukuze ngisuse izinsalela zezimonyo eziningi nokugcina isikhumba sami sibushelelezi. Ngenxa yama-hydroxy acids anamandla ( I-AHA, i-BHA ne-PHA ), isebenza ukukhipha ngobumnene, ukuvala izimbotshana, nokulwa nokuphuma. Ngiwubone ngokuphelele umehluko selokhu ngangeza enkambisweni yami. —UJillian Ruffo, umnikeli
Ngokuzithoba komkhiqizo 14/19
I-Glossier Brow Flick
Nginesimiso sami samashiya phansi pat: Ngisebenzisa i-primer / growth serum bese ngisebenzisa eyami U-Anastasia Beverly Hills Brow Wiz nokuthi kunjalo. Imikhiqizo emibili futhi sengiqedile. Kodwa-ke, ngemuva kokuzama i-Glossier's Brow Flick in Black, ngabona ukuthi amashiya ami ayeshoda ngencazelo ebucayi. I-Brow Flick nakanjani yenze ukuthi iziphequluli zami zigqame kakhulu kunakuqala, futhi njengoba ngizikhulisa zaba iziphequluli ezinkulu ezinamahloni engizifunayo, sekuba ukwengezwa okucashile okuphelele enkambisweni yami. Ithiphu mncane futhi inembile, futhi ungakwazi ukusula / ukuxubha noma yimaphi amaphutha owenzayo. --K.H.
IGossier Body Hero Dry-Touch Amafutha Mist
Bengingumlandeli we-Body Hero lotion selokhu yaqala, kepha muva nje bengingene kakhulu kumafutha, ngakho-ke lokhu bekungeke kufike ngesikhathi esingcono. Njengodadewabo omdala, ukupakisha kubukeka kuhle futhi kuyabiza, futhi kungenza ngimamatheke njalo uma ngibona endlini yami yokugezela. Uwoyela ngokwawo ulula kakhulu — uwoyela owomile ukuze ukwazi ukubeka i-jean ngaso leso sikhathi noma uzungeze emashidini ahlanzekile ngaphandle kokushiya isiphithiphithi — kodwa uzizwa unondla ngempela futhi uluhlaza. Ingxenye engiyithandayo, noma kunjalo, iphunga; i-neroli ephelele enensipho engenza ngizwe njengengane ecebile yaseYurophu. Anginazo izikhalazo. —B.C.
$ 28 $ 22.40 I-Glossier Thenga Manje
IGlossier Skywash Matte Eyeshadow
Izithunzi zamehlo ezimenyezelayo zikaGlossier zeLidstar bezilokhu ziyinsika esikhwameni sami sokwenza izimonyo iminyaka, ngakho-ke lapho lo mkhiqizo wembula ukuthi wethula isithunzi se-matte, nganginethemba elikhulu. Ngenkathi ngifisa ukuthi ukufakwa kube okuthakazelisa ngokwengeziwe (empeleni, ungawashaya kanjani amashubhu wokuhlola ama-Lidstar amancane?), Ifomula ngaphezu kokulenzela yona. Imibala i-matte, yebo, kepha isaqhubeka nokukhanya okukhulu, izithunzi zamehlo zikaGlossier ezidume ngazo. Okomile, okwamanje, kubukeka njengempuphu ngaphandle kokoma kwe-telltale noma i-cakey-ness. Engikuthandayo umthunzi oluhlaza okwesibhakabhaka, i-Pool, engikhumbuza i-powder blues eyayinkulu ngasekupheleni kweminyaka yama-90s-kodwa ibukeka kahle endaweni ye-2020. —L.S.
I-Glossier Body Hero Exfoliating Bar
Ake ngingenise lokhu ngokuthi nginguye hhayi intombazane eyinsimbi, kodwa-ke ngikhathazekile ngaleli bha eliqothulayo. Okokuqala, ngiyakuzonda ukuthi kungakanani ukuhlikihla umzimba okushiya umzila wezizathu ezansi kubhavu wami, futhi okuningi kushiya isikhumba sami esivele sinamafutha sengathi kunefilimu ezacile phezu kwaso. Lokhu kuhambisa amanzi kepha kunzima kumachashazi esikhumba, futhi ngithanda umthombo omncane phansi kwebha ekuvumela ukuthi ubeke okokugeza umzimba ngaphezulu ukuze ukwazi ukugeza nokukhipha uketshezi olulodwa. —L.S.
$ 14 $ 11.20 I-Glossier Thenga Manje
Ngokuzithoba komkhiqizo 18/19
Lokhu kungaba ukuthatha okushisayo, kepha angisebenzisi imikhiqizo eminingi yeGlossier — uma ikhona — enkambisweni yami yansuku zonke. (Ngiyazi, ngiyazi.) Kunokwehluka okukodwa, nokho, futhi lokho kuwuWowder. Impuphu engalawuleki iyakwazi ukunikeza isikhumba sami ukubukeka kwamazolo okwamanje sinamazolo ngaphandle kokuzizwa sinamakhekhe kakhulu. Kufana nokubeka isihlungi se-IRL esikhunjeni sakho. -U-Anna Moeslein, umhleli omkhulu
Ngokuzithoba komkhiqizo 19/19
IGlossier Lidstar Eyeshadow
Kuyamangalisa ukuthi lezi zithunzi zamehlo zivusa ubuso bakho kalula kanjani. Ngikubeke ngokungathi sína ngemuva kwekhumbi ngaphandle kwesibuko — yindlela okulula ngayo lokho. Ngokuswayipha okukodwa kanye ne-smudge esivalweni sakho, kushiya ukugeza kombala okuhle kunakho konke ngemuva. Izinsuku eziningi ngigqoka uLily, umbala we-lilac, ne-mascara (i-fave yami yamanje nge-Maybelline), futhi kunikeza umbono wokuthi ngifaka ukucabanga okuningi ekulungiseleleni. Futhi uma ngike ngaphuma ebusuku kakhulu? Ngizofaka iNyanga ezingxenyeni ezingaphakathi zamehlo ami ukuze ngiyikhanye. —L.S.
uyazisola ngokuhlukana nesoka
kufanele ugqoke okumnyama emshadweni
Izingubo zomshado wasemabhishi zasebhishi 2015